drmyothida – Dr Myo Thida
Author Archives: drmyothida
TVET sector ၏ အဓိက ရည် ရွယ် ချက် သည် လုပ်ငန်းခွင် အတွက် လိုအပ် သော အမှန် တတ် ကျွမ်းသည့် ပညာရှင် များ မွေး ထုတ် ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်အရ ကျောင်း နဲ့ စက်ရုံ စီးပွား ရေး ပညာ ရှင် တွေ နဲ့ ပူး ပေါင်းဖို့ လိုပါတယ်။ သို့ မှသာ နိုင်ငံမှာ လိုအပ်တာက ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်လို ပညာရပ်တွေ သင်ပေးရမယ်ဆိုတာ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ သော် မြန်မာပြည်မှာ ပြသနာ တချို့ ရှိလာပါတယ်။ ၁) စီးပွား ရေး ပညာ ရှင် တွေကContinue reading “TVET Sector နှင့် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်”
Posted bydrmyothida February 22, 2017 February 22, 2017 Posted inVocational EducationLeaveacomment on TVET Sector နှင့် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက်
Dr Myo Thida is the newly appointed Vice President of Shenton Education Group (SEG) and concurrently the Deputy General Manager of SEG subsidiaries, Temasek International College (TIC) and Shenton Institute of Applied Finance (SIAF). TIC monthly newsletter (TIC Heartbeat) student journalist Yadanar Oo had the opportunity to chat with Dr Myo Thida earlier today. BelowContinue reading “Interview with Shenton Education Group”
Posted bydrmyothida February 22, 2017 February 28, 2017 Posted inInterviewLeaveacomment on Interview with Shenton Education Group